युवककाे बाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडेकी,यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मुक्स्किल पर्ने घटना, ! – AB Sansar
युवककाे बाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडेकी,यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मुक्स्किल पर्ने घटना, !
October 4, 2020 adminLeaveaComment on युवककाे बाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडेकी,यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मुक्स्किल पर्ने घटना, !
चक्र खडायत – मलाई बिहानै ८/९ बजे नै नेपालगन्ज पुग्नु थियो, बिहानै साढे ५ बजे तिर हतारमा उठियो। मम्मीलाई नि उठाएर आफ्नो लागि खाजा बनाउन लगाए किनकी कोरोनाको समय छ, सबै ठाउँमा खाना नास्ता खाने जस्तो माहोल छैन।फ्रेस भएँ। मम्मीले पकाउनु भएको नास्ता खाएँ, झोला तयार पारे। यति गरुन्जेल ६ बजिसकेको थियो। मम्मीलाई हतारमा ल अब हिडेँ भनेर बाइक निकालेँ। एउटा काँधमा झोला भिरेँ, बाइक स्टार्ट गरेँ। ** ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
छर्लङ्ग उज्यालो भैसकेको थियो। मलाई नेपालगन्ज पुग्नु थियो समयमै। दाइ म लागेँ है, ढिला हुन्छ भनेर अगाडि बढेँ। खुटियाको पुलमा पनि मर्निङ वाक गर्नेहरु हिँडिरहेका थिए। बिहानको चिसो मौसम, सरर हावा खादै म नि अगाडि बढ्दै गएँ। बनबेहडा, कुचैनी राजिपुर हुँदै मसुरिया पुगेँ। गाडीहरु नि खासै चलेका थिएनन्, रोड खाली नै थियो। मैले धान्न सक्ने स्पिडमा बाइक चलाउन कुनै कुराले अबरोध गर्ने जस्तो अवस्था थिएन।
मैले नेपालगन्ज भनेँ, उनले खुसी हुँदै भनिन् ‘ए हो र?’
‘तपाई कहाँसम्म जाने?’उनले उत्तर फर्काइन् ‘तपाईं जहाँसम्म लग्दिनु हुन्छ, त्यहीसम्म। तर जाने त म नि नेपालगन्जसम्मै हो।’ए हो र? ल बस्नुस्, म नि त्यहीसम्म जाने हो।’उनले फेरि सोधिन्, ‘कसरी बसौँ?’‘तपाईलाई जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसरी नै बस्नुस्।’
घोडाघोडी तालको बाटो हुँदै सुख्खड, सांढेपानी मुढा हुँदै बर्दगोरिया अनि लम्की पुगियो। लम्कीमा अलि बाइक स्लो भयो, अलि भीडभाड भएकै कारण। उनले मौका पाउने बित्तिकै फेरि प्रश्न गरीहालिन्, ‘नास्ता खाने की?’मैले चिसापानीमा खानु पर्छ भनेँ। उनले हुन्छ भनिन् अनि अगाडि बढेँ। मनमा कुराहरु खेल्न थाले।
जीउ सिरिङ्ग भयो, अँखाबाट कतिखेर आँसु आयो पत्तो नै भएन। अरु धेरै केही सोध्न मन लागेन। उनकी साथीले अर्को म्यासेज गरिन्- तपाई को? मैले म्यासेज सीन गरेर छोडेँ, उत्तर मसँग थियो तर दिनै मन लागेन।जिवनमा धेरै मान्छेलाई लिफ्ट दिइयो तर उनीसँग
युवतीको बयान : त्यसपछि उनीहरुले पालैपालो गरे र साथीको जिम्मा ल गाए !
बलिउड तथा साउथ फिल्मकी अभिनेत्री तमन्ना भाटियालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि